Xiisad kacsanaan ah oo ka dhalatay shaqo ka fariisiin lagu sameeyay C/risaaq Bahlaawi (AKHRISO) - Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Xiisad kacsanaan ah oo ka dhalatay shaqo ka fariisiin lagu sameeyay C/risaaq Bahlaawi (AKHRISO)
Tan iyo markii uu wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Injineer C/raxmaan Cumar Yariisow uu shaqo fariisin ku sameeyay agaasimaha guud ee wasaaradaasi C/risaaq Yuusuf Bahlaawi ayaa waxaa arrinkaasi ka dhashay xiisad kacsanaan ah.
C/risaaq Yuusuf Bahlaawi oo weli ku adkeeysanaya inuu yahay agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta ayaa si cad u diiday inuu xilka banneeyo islamarkaana uu aqoonsado amarka Injineer Yariisow, isagoona sidoo kale diiday tallo soo jeedinta ra’iisul wasaaraha, waxayna arrintaasi keentay xiisad kacsanaan ah.
Sidoo kale, xeer illaaliyaha qaranka oo kiiska C/risaaq Bahlaawi gacanta ku haaya ayaa isna ku guuleysan waayay inuu qanciyo, waxaana la sheegay agaasime Bahlaawi oo 10 sano ku dhawaad xilka soo haayay uu haatan awood sheeganayo.
Ugu dambeyntii, wasiirka warfaafinta Injineer C/raxmaan Cumar Yariisow ayaa soo saaray amar looga mamnuucayo agaasimaha guud ee wasaaradaasi C/risaaq Yuusuf Bahlaawi ee shaqada laga fariisiyay inuu soo galo xarunta wasaaradda, waxaana amarkaasi la faray ciidanka ammaanka ee ku shaqada leh wasaaradaas.
Hoos ka aqriso warqada kasoo baxday wasiirka warfaafinta Injineer Yariisow